Thomas Tuchel oo sheegay inuu durbaba la kulmay Neymar Jr (Maxay ka wada hadleen?) – Gool FM
(PSG) 20 Maajo 2018.Tababaraha cusub ee kooxda Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ayaa xaqiijiyay inuu la kulmay xidiga koowaad ee kooxda PSG Neymarn Jr, todobaadkii hore.
Thomas Tuchel ayaa wuxuu arintan kahor sheegay shirkiisa jaraa’id ugu horeeyay ay kooxda Paris Saint-Germain saacado kahor ugu soo bandhigtay saxaafada.
Tuchel ayaa u sheegay saxaafada: “Haa, waxaan la kulmay Axadii hore Neyma, waxaana uu ahaa kulan wanaagsan, waa ciyaaryahan aan caadi aheyn, wuxuuna ka mid yahay xidigaha aduunka ugu fiican”.
“Waxaa ina hor tiilay warqad cadaan ah, waxaan si wada jir ah ugu dhejinay qorshaha lasoo jeediyay waxaana ka wada hadalnay in badan”.
“Waxaan ku tiirsanaan doonaa isaga, si kooxda ay u qaadato jawi aad u wanaagsan, Dhamaan xiddigaha waawayn uma baahna inaad ula dhaqanto si khaas ah, laakiin qaab dhismeed adag ee ku wareegsan iyaga ayaa naga caawin kara, inaan gaarno ujeedooyinkeena”.
“Ciyaartoyda waaweyn wey fududahay sida lala dhaqmo, sababtoo ah waxay ogyihiin waxa looga baahan yahay iyaga, waxayna xiiseenayaan in si adag ay u shaqeeyaan, laakiin waxaa adkaan doonta diyaarinta qorshaha xili ciyaareedka cusub, iyadoo la qaban doono koobka aduunka”.
“Kama baqayo inaan la kulmo xidigaha waaweyn, isla markaana aan la shaqeeyo, waan ogahay inaan ku guuleystay hal koob oo kaliya, laakiin maamulka kooxda ayaa waxay xaqiijiyeen inay raadinayeen macalin hogaamin kara ciyaartoyda isla markaana aragti u leh mustaqbalkooda, ee ma ahan in macalinka uu ku guuleysto koobab fara badan”.
Andrés Iniesta oo ku macsalaameeyay garoonka Cump Nou fariin qiiro leh